Kuncinci kakhulu okuseleyo de iMacOS ePhakamileyo yeSierra 10.13 isungulwe ngokusemthethweni | Ndisuka mac
Kuncinci kakhulu okuseleyo kude kube kukhutshwa iMacOS ePhakamileyo yeSierra 10.13
Sishiyeke nje iiyure ezimbini ukusuka kumiliselo olusemthethweni lwenkqubo entsha yenkqubo yokusebenza kweMac kwaye kukuthi emva kokubona ukumiliselwa kwe-iOS 11, i-tvOS 11 kunye ne-watchOS 4 kwezi ntsuku, abasebenzisi beMac nabo bazakuba nomzuzu wethu namhlanje. I-Apple iyakukhupha inguqulelo engabonakali kakuhle kwizinto zayo ezintsha okanye imisebenzi emitsha, kodwa inenqanaba eliphezulu ngokubhekisele kuzinzo ngokubanzi kwaye ngakumbi utshintsho kwinkqubo entsha yefayile ye-AFPS.
Kufuneka kuthiwe abasebenzisi abangenayo idiski ye-SSD okanye iiMacs ezineFusion Drive, kungcono ukuba bangawusebenzisi lo msebenzi mtsha, enyanisweni u-Apple uqobo ucacisa ukuba abo basebenzisi baneFusion Drive kwiiMac zabo kufunekaubuyela kwifomathi ye-HFS +.
Nokuba kunganjani na, sikufutshane kakhulu ekufumaneni iindaba eziboniswe kwi-WWDC yokugqibela kulo nyaka kwaye Abasebenzisi abahlala eSpain kulindeleke ukuba Unenguqulo entsha yeMacOS ePhakamileyo yeSierra ekhoyo. EMexico izakufika ukuqala nge-12 kwaye eArgentina ngo-14.
Yintoni entsha kwi-MacOS High Sierra ngokungathandabuzekiyo inomdla kwaye isindululo kukuhlaziya iqela lethu ewe okanye ewe kuba uphuculo olwenziweyo lunomdla kuwo wonke umntu kwaye Ukuba iMac yethu ineMacOS Sierra, ayizukubi ngakumbi ngenxa yenguqulo entsha yeMacOS ePhakamileyo yeSierra.
Ungalufumana lonke ulwazi malunga nale nguqulo intsha ndivela kwi-Mac, ukusukela ngokuboniswa kude kube namhlanje sibhale amanqaku achaza nganye yezinto ezintsha ezongeziweyo. Ukuba ungomnye wabo banenguqulo ka-beta kawonkewonke efakwe kwikhompyuter yakho, kuya kufuneka uphume kwinkqubo ukuze uhlaziyo luvele kwaye oku kwenziwa ngokuthe ngqo kwi Ukukhetha kwenkqubo> Ivenkile yeeVenkile. Namhlanje kufuneka sihlaziye kwaye kungcono ukuba siqwalasele ukuba sibe phakathi kwabokuqala ukukhuphela kunye nokufaka ingxelo entsha okanye ngokuthe ngqo silinde ingomso okanye usuku olulandelayo ukwenza uhlaziyo. Mva nje, iiseva zeApple zixhasa ngokugqibeleleyo iinguqulelo ezintsha, kodwa kungcono ungangxami kwaye ngaphezulu kwako konke ngaphambi kokuba uhlaziye landela ezi ngcebiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Mac OS X » i-MacOS High Sierra » Kuncinci kakhulu okuseleyo kude kube kukhutshwa iMacOS ePhakamileyo yeSierra 10.13
IMacOS ePhakamileyo yeSierra 10.13 ngoku iyafumaneka kuye wonke umntu!
I-MailButler yeyona ndawo ifanelekileyo yokongeza imisebenzi kwi-imeyile